Airlinesgbọ elu nke Hawaiian gbasaa mmemme Pre-Clear na Japan, South Korea | Akụkọ ụgbọ elu
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Iigbọ elu ụgbọ elu Hawaii na-agbasawanye Mmemme Clear Clear na Japan, South Korea
Iigbọ elu ụgbọ elu Hawaii na-agbasawanye Mmemme Clear Clear na Japan, South Korea
Mụbawanye Mmemme Nkọwa na Japan na South Korea na-eme ka ahụmịhe njem njem maka ndị ọbịa mba ofesi ụgbọ mmiri dị mfe
Iigbọ elu ụgbọ elu Hawaii ghọrọ ụgbọ elu ụgbọ elu mbụ na-efe n'etiti Japan na Hawaii inye Mmemme Clear Clear
Pre-Clear na-ebido Fraịde na Incheon International Airport (ICN) n'oge dị mma
Ndị ọbịa Hawaiian si Japan na South Korea bụ ndị na-esonye na Pre-Clear Mmemme ga-enweta akara aka mgbapụta mbụ nke onye ọrụ nlekọta ndị ọbịa na Hawaiian Airlines
Airlinesgbọ elu ụgbọ elu Hawaii na-agbasawanye Mmemme Mwepu ya na Japan na South Korea, na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ndị njem mba ụwa ịga leta na ịnụ ụtọ Hawaii n'enweghị nsogbu.
Hawaiian ụgbọ ghọrọ ụgbọ elu mbụ na-efe n'etiti Japan na Hawaii iji nye Pre-Clear Mmemme mgbe ọ malitere ọrụ na Narita International Airport (NRT) na ngwụsị izu. Usoro ihe omume a, nke ga-abawanye na Kansai International Airport (KIX) na Tọzdee, na-enye ndị ọbịa ohere ịchọta nyocha nke njem Hawaii tupu ha agafee ogige iche nke ụbọchị 10 na nyocha ọdụ ụgbọ elu na Honolulu site na ịnwepụta akwụkwọ ha tupu ha abanye.
Kpochapu amalite Friday na Incheon International Airport (ICN) n'oge dị mma: Hawaiian gbakwunyere ụgbọ elu nke abụọ kwa izu n'etiti Honolulu (HNL) na ICN iji gboo mkpa dịwanye ukwuu.
"Expgbasawanye Ihe Nleba Anya anyị na Japan na South Korea na-eme ka ahụmịhe njem njem maka ndị ọbịa ụwa anyị dị mfe ka ha wee nwee ike iwe obere oge n'ọdụ ụgbọ elu na oge ezumike karịa ma ọ bụ ịzụ ahịa na Hawaii," ka Theo Panagiotoulias, onye isi osote onye isi oche maka ahịa ụwa. na njikọta na ụgbọ elu Hawaiian. "Anyị na-atụ anya na anyị na Steeti Hawaii ga-agbasawanye mmemme a na ahịa ndị ọzọ, ma na-aga n'ihu na-ewughachi njem na Hawaii n'ụzọ dị mma maka ndị ọbịa na obodo anyị."
Ndị ọbịa Hawaiian si Japan na South Korea ndị sonyere na Pre-Clear Mmemme ga-enweta akara aka mgbapụta Pre-Clear site na ndị ọrụ na-ahụ maka ndị ọbịa na Hawaiian ga-enyocha akwụkwọ ha tupu ha abanye. Iji ruo eru maka tupu nwechapụ, ndị ọbịa ga-mezue usoro ndị a:
Mepụta akaụntụ njem njem maka ndị okenye niile na njem.
Tinye ozi ụgbọ elu na ebe obibi na akaụntụ.
Mezue akwụkwọ nyocha ahụ ike dị mkpa n'ime akaụntụ ahụ.
Bugote nsonaazụ nnwale na-adịghị mma (usoro PDF) site na onye mmekọ nnwale a nwapụtara na steeti gaa na akaụntụ Njem Nchekwa. A na-atụ aro iburu otu mbipụta nke nsonaazụ nnwale adịghị mma.
Ndị njem na-ebuteghị nsonaazụ ule COVID-19 na ngwa Njem Njem tupu ọpụpụ ga-abanye na steeti Hawaii ụbọchị nkwekọrịta iche iche nke onwe ha mgbe ha rutere na steeti.